खेताला कर्मचारी खोजेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ‘तीर्थ-ब्रत’ मा – Gulmiews
खेताला कर्मचारी खोजेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ‘तीर्थ-ब्रत’ मा
७ माघ २०७३, शुक्रबार २१:४५ राजु गौतम
गुल्मी, माघ ७ गते । जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यावस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभए, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिन्छ । जिल्ला प्रसासन कार्यालय गुल्मीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छैनन ।
तर २ जना प्रसासकिय अधिकृत रहेका छन् । केहिलेकाँहि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएको अवस्थामा तोकिएका उनै दुवै जनाले जिल्ला प्रसासन कार्यालय संचालन गर्ने गर्दछन् । तर बिहिबार र शुक्रबार जिल्ला कारागार प्रमुख गोपाल प्रसाद पाण्डेयले जिल्ला प्रसासन कार्यालय संचालन गरे । जिल्ला प्रसासन कार्यालयका एक जना प्रसासकीय अधिकृत भत्तिराम मरासिनी बिदामा छन् । अर्का अधिकृत रामचन्द्र पन्थीलाई लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थ गर्न स्वर्गद्धारी पुगेका छन् । बिहिबार र शुक्रबार जिल्ला कारागारका प्रमुख गोपाल प्रसाद पाण्डेय आफ्नो कार्यालय छोडेर जिल्ला प्रसासनमा आए ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालय, जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयकै प्रमुख अड्डा हो । प्रम्ुख जिल्ला अधिकारी सवै कार्यालय प्रमुखहरुको हाकिम । जिल्लाका अरु कार्यालयहरुमा भैरहेको अनियमितता, ढिलासुस्ति, र सेवा प्रबाहको अनुगमन गर्ने कार्यालय जिल्ला प्रसासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रसासन कार्यालयकै यो हविगत भएपछि अरु कार्यालयले के सिक्ने ? फेरी खेलाता खोजेर बाहिर तिर्थ हिडेका ढुंगानाको यो प्रवृति पहिलो पटक भने अवश्य होइन ।
केहि समय अगाडी पनि जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दुई अधिकृत नै नभएर जनताले सेवामा सास्ती खेप्नु परेको समाचार पनि विभिन्न संचार माध्यममा आएका थिए । त्यति बेला पनि यो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता स्वयम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङगानाले गरेका थिए । तर एक साता नबित्दै फेरी यो प्रवृति दोहोरिएको छ । जिल्ला प्रसासन कार्यालयलाई नागरिक मैत्री तथा अन्य धेरै मैत्री नामले कर्मचारीहले भाषण गर्छन । तर त्यहि कार्यालयको यस्तो हर्कतले सेवाग्राहिहरुले समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।
बुहारीको नागरिकता बनाउन बिहानै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा आएका वाग्ला ९ का घनश्याम पाण्डेले अरु सबै कागजपत्र मिलाएर पनि नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्नकै लागि डेढ घण्टा देखि लाइनमा बस्नु परेको गुनासो गरे । उनले बुहारीको नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने ब्यक्तिको को हो ? भनेर सोध्दा कार्यलयका कर्मचारी आफूसग झोक्किएको समेत गुनासो गरे । त्यस्तै गुल्मी सेउघाका जमुना कुवँरले पनि २ घण्टादेखि नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्नकै लागि प्रशासन फाँटमा कुरेर बस्नु परेको बताइन । उनले नागरिकता फाँटबाट आफूलाई कोठा नम्बर ६ मा पठाइए पनि त्यहाँ कोहि पनि नभएकाले कुरेरै लाइनमा बसेको प्रतिक्रिया दिइन । शुक्रबार प्रशासन कार्यलयमा पाण्डे र कुवँर मात्र होइन् ।
विरवासका दिपक कुमार पार्सपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा आएका थिए । उनलाई पनि अरु सबै कागजी प्रक्रिया मिलाएर प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा पठाइयो, तर त्यहाँ कोहि पनि थिएन् । बाबुछोरा आएका उनीहरुले पनि नागरिकलाई सेवा दिने प्रशासन कार्यलयमा कोहि पनि नहुँदा आफूहरुलाई समस्या परेको बताए । त्यस्तै गुल्मी खज्र्याङ्गका सागर कुवँरले पनि पार्सपोर्टमा हस्ताक्षर गर्न लाइनमा बसेको १ घण्टा भएपनि कुनै पनि कर्मचारी नआएकोले आफ्नो काममा समस्या आएको प्रतिक्रिया दिए ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालयको अगाडी लाँकुरीमञ्चमा जम्मा भएका पत्रकारहरुले पनि पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो प्रवृति दोहो¥याउनु सेवा प्रति जवाफदेहि नबन्नु भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङगानालाई टेलिफोन गर्दा सवै कुरालाई नकरात्मक नलिन सुझाव दिए । उनले एक÷दुई दिन मात्र त्यस्तो भएपनि आइतबार यो अवस्था नआउने बताए । सेवाग्राहिहरुले जिल्ला प्रसासन कार्यालयकै एक जना अधिकृत हुँदाहुँदै, आफुले संगै लगेर खेताला खोज्नु लज्जास्पद भएको प्रतिक्रिया दिए । जिल्ला प्रसासनमा काम समालेका कारागार प्रमुख गोपाल प्रसाद पाण्डेयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा दुई दिन प्रसासनको काम गरेको बताउँदै यसलाई नकरात्मक रुपमा नलिन आग्रह गरे ।